वैदेशिक रोजगारमा Hemraj को छड्के ! हाकिमको सातो लिए, मान्छे बे’च्ने द’लाल भनेपछि पर्यो चर्का’चर्की Jwala – Onlines Time
January 28, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on वैदेशिक रोजगारमा Hemraj को छड्के ! हाकिमको सातो लिए, मान्छे बे’च्ने द’लाल भनेपछि पर्यो चर्का’चर्की Jwala
इजलासमा भइरहेको बहसलाई शर्मा ओलीले ‘तमासा’ भनेर खिसी गरेका भए पनि सन् १९९० पछि सर्वोच्च अदालत नेपालको व्यावहारिक तवरले नै सर्वोच्च निकाय बन्न पुगेको कुरा उनलाई पक्कै हेक्का हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले नियमजन्य औचित्यको सीमा नाघ्ने संकेत अहिलेसम्म दिन सकेको छैन ।
इसारा ठम्याएर खुसी मनाउन सकिन्छ, तर अन्तिम निर्णय नआएसम्म आश्वस्त हुन कठिन हुन्छ । बाह्य खेलाडीहरूको अभूतपूर्व चलखेलले गर्दा हुनुपर्छ, गएको निर्वाचनमा व्यापारीहरूमाथि चन्दाको दबाब अपेक्षाकृत कम थियो ।
लामो कालसम्म आफ्ना नृजातीय मुख्तियारको राजनीतिक वजन थामेका नेपालको ‘डोली मिडिया’ भन्न सकिने प्रतिबद्ध सांस्कृतिक कहारको काँध पनि थाकिसकेको हुनुपर्छ । आजीवन कार्यकारी प्रमुख कायम रहिरहने महत्त्वाकांक्षामा खतराको सम्भावना देखेर होला, नागरिक आन्दोलनको उद्घोष हुनासाथ शर्मा ओली पशुपतिनाथको शरण पर्न गए । हल्का गेरु रङको कोटमाथि रुद्राक्षको माला तथा सुगन्धित पुष्पहार एकताकाका झापाली नक्सलपन्थीको व्यक्तित्वमा बिछट्टै सुहाएको थियो ।
दक्षिणतिर बगिरहेको हिन्दुत्वको बयारले उत्तरको प्रभावलाई उडाएर लाने उनको अपेक्षा आधारहीन होइन । तर, आन्तरिक रूपमा उनको नेतृत्व अस्वीकृत भइसकेकाले बाहिरी प्रभाव मात्रले उनलाई धेरै दिनसम्म थामेर राख्न सक्ने सम्भावना दिनानुदिन क्षीण हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ ।